Qalabka Qalabka Mashiinka, Nidaaminta Qaybaha Qalabka - K-Tek
Sax qaybo farsamo processing
（+ 86） 0769-88459539
KIISKA SOO SAARKA
Qalabka Qalabka Mashiinka
5 dhidibka CNC axdi qarameedka
Milling CNC (3-4 dhidibka)
CNC leexinta (2-12 dhidibka)
Qeexida Qaybaha Sax
Dhamee & Daaweynta kuleylka
K-Tek Machining Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2010, oo ku taala "Warshada Aduunka" -Dongguan, Shiinaha, oo daboolaysa aag ka badan 20,000 oo mitir murabac ah, oo ku takhasusay farsamaynta qaybaha mashiinada saxda ah waxayna soo martay shahaadada ISO9001: 2015 .
Waxaan u habeyn karnaa wax soo saarka dhammaan noocyada qalabka mashiinnada saxda ah iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, alaabooyinka la xiriira mashiinada, korantada, otomatiga, baabuurta, caafimaadka, tamarta cusub iyo dhinacyada kale.
Hawlaha Tayada Sare
Si loo hubiyo shuruudaha tayada ee macaamiisheenna, waxaan soo dejinay qalab wax lagu farsameeyo oo casri ah iyo qalabka baaritaanka sida Mashiinka Shan-dhidibka ah (DM), CNC, WEDM-LS, Muraayada EDM, Furimaha Gudaha / Dibadda, Laser Going, 3D CMM, Dhererka Miisaanka iyo Falanqeeyaha Waxyaabaha iwm ee ka kala socda Jarmalka, Japan, Switzerland iyo Mareykanka.
Milling CNC & Wareeg
5 dhidibka xarunta makiinada CNC waxay siisaa qalabaynta saxda ah ee saxnaanta sare iyo qaybo adag.
Bixi 3-dhidib iyo 4-axis adeegyada axdi qarameedka CNC.
Wareejinta CNC (2-12Axis)
Bixi 1-400 (mm) CNC rogista iyo qashin ka sameynta isku dhafka
Bixi shiidida saxda ah ee godadka iyo wareegyada dibadda.
Bixi mashiinka goynta silig sax ah.
Daaweynta kuleylka & Dhameystirka
Polish, anodise, passivation, zinc / nickel / chrome iyo dahaadh lacag, daaweynta kuleylka iwm
Dad u janjeedha, hal-abuurnimo isdaba-joog ah, Tayo iyo hufnaan, Macaamiil marka hore.
Ujeeddooyinka tayada ：
Si aad ugu noolaato tayada, qanacsanaanta macaamilku waxay gaadhay in kabadan 95%, ku dadaal inaad hesho 100% qanacsanaanta macaamilka. Nidaamka tayada waxaa lagu aasaasay iyadoo lagu saleynayo ISO9001: 2015 waxaana loo dejiyay alaab farsamo oo sax ah, ujeedadeeduna tahay inuu buuxiyo shuruudaha macaamiisha illaa inta ugu badan. Nidaamka tayada wuxuu qaataa habka xakamaynta tayada nidaamka ku saleysan, oo daboolaya howlaha ganacsi ee shirkadda, wax soo saarka iyo soo saarista, adeegga macaamiisha, deegaanka iyo kormeerka 5S, iwm.
3 Dhibic Micrometer Gudaha
In la ixtiraamo dhamaan asxaabta dadaalka iyo tabarucaadka shaqada ee K-TEK, iyo sidoo kale kor u qaadida xiriirka ka dhexeeya asxaabta, xoojinta isgaarsiinta iyo dockin ...
Bandhigga K-Tek & Exhibition
Ka dib toban sano oo horumarineed, K-Tek ma aha oo kaliya tiro badan oo xirfadlayaal iyo shaqaale farsamo leh iyo koox maamul oo heer sare ah, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay koox iib ah oo aad u fiican. Si aan ugu ogolaado ...
Takhasus u leh qalabka mashiinada saxsanaanta lagu farsameeyo oo uu ka gudbay shahaadada ISO9001: 2015.
Su'aalaha ku saabsan wax soo saarkayaga, fadlan noo dhaaf e-maylkaaga waxaanan la xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.
Xinhe Industrial Zone, Degmada Wanjiang, Magaalada Dongguan, Gobolka Guangdong, Shiinaha